I-Multiple Sclerosis: ubudlelwano phakathi kwemisebenzi yesikhundla kanye nenkumbulo yesikhathi eside yomlomo - Ukuqeqeshwa Komqondo
Ulapha: Ikhaya » Ochwepheshe » Izihloko » I-Multiple sclerosis: ubudlelwano phakathi kwemisebenzi yesikhundla kanye nenkumbulo yesikhathi eside yomlomo
Sesikhulumile kaningi ngokwenzeka ubunzima bokucabanga kwe-sclerosis eminingi ezingathinta i inkumbulo futhi i imisebenzi ephezulu. Sibonile nokuthi lokhu kusilela, lapho kukhona, nakho kuvame ukuhlangana ubunzima empilweni yansuku zonke, kanye ne amakhono okushayela et al ukugcinwa kwemisebenzi; sesibonile nokuthi kungenzeka kanjani ukuba khona kwezinkinga ezinjalo zokuqonda ukubikezela inqubekela phambili yesifo futhi i ukuguqulwa kusuka ekubuyiselweni emuva ekuxolelweni kuya ekuthuthukelweni.
Ngocwaningo olushicilelwe ngonyaka ka-2019, uPitteri nabahlanganyeli babefuna ukucacisa ubudlelwano phakathi kwememori nemisebenzi yezikhundla kwisimo se-multiple sclerosis. Ocwaningweni lwabo, abacwaningi babeka imigomo emibili:
Phenya iqhaza imisebenzi ephezulu ekulahlekelweni kokufunda ngamazwi okwenzeka njalo kubantu abane-sclerosis eminingi
Qondisisa lobu budlelwano ngokubheka kwezinguquko zobuchopho (ubukhulu be-cortical ubukhulu ezifundeni ezihlobene nememori nezifunda ezihlobene nemisebenzi ephezulu).
Ukufeza izinhloso ezisanda kuchazwa, iqembu leziguli lahlaselwa ukuhlolwa kwenkumbulo ngamazwi kukhishwe ku Ibhethri elifushane neliphindaphindwayo leTivivinyo se-Neuropsychological Ukuhlolwa Kokukhunjuzwa Kokukhetha kukaRao, isivivinyo esifana nesokufunda kweBuschke-Fuld's Verbal Supra-Span Learning (nansi incazelo emfushane).
Abantu abafanayo nabo baye babuswa futhi ukuhlolwa kwemisebenzi yokuphatha: I-Stroop Test, i-Alternate Fluence Test ne-Modified Five Point Test (zonke izivivinyo zikhona kuchazwe lapha).
Ngaphezu kwalokho, esigulini ngasinye, ngokusebenzisa ukucabanga komoya oshukumisayo, babekhona funa izinguquko ebuchosheni Zombili izindaba ezingwevu nezindaba ezimhlophe okukholelwa ukuthi zixhunyaniswa kwimemori nokushoda kokusebenza okuphezulu.
Kuqhathaniswa nemisebenzi ephezulu, i- Okunye Ukuhlolwa Kokukhanya Kombala yayihlotshaniswa kakhulu nezikolo ekuhlolweni kwenkumbulo, kuze kufike lapho ichaza khona isabelo umehluko phakathi kuka-38% no-42% wokuhlolwa okwenziwe ngomlomo.
Qhathaniswa ubukhulu be-cortical, ukushintshwa kwecortex engakwesobunxele yangaphambili, ye-hippocampus yangakwesokunxele nakwesobunxele, ye-cortex yangakwesobunxele noma engakwesobunxele kanye nesigxobo esingakwesobunxele sachaza isabelo umehluko phakathi kuka-45% no-52% wokusebenza kwimemori yemisindo.
Ngakho-ke, amakhono okufunda ngomlomo abonakala ehambisana nokushiyeka ekusebenzeni okuphezulu nasekuguqulweni kobuchopho bangaphambili nokwesikhashana.
Imininingwane evela kulolu cwaningo iphakamisa ukuthi kungenzeka ukuthi imisebenzi ephezulu, ikakhulukazi yokuguquguquka kwengqondo, ithonye amakhono e-mnesic, ukuthola imininingwane eyengeziwe ukusekela lo mqondo ekuxhumaneni phakathi kokushintshana kwendawo yangaphakathi kwendawo kanye nokusilela kokufunda ngomlomo.
Kubalulekile ukugcizelela ukuthi imininingwane evela kulolu cwaningo ihambelana kuphela futhi ayikuvumeli ukufinyelela eziphethweni mayelana nezixhumanisi zokubangela umphumela. Kodwa-ke, uma iziphetho ezifinyelelwe ngababhali (mhlawumbe ngokushesha okukhulu) ziqinisekiswe olunye ucwaningo, kungaba nengqondo ukucabanga ukuthi, lapho kukhona ukusilela kwe-mnemonic, ukuvuselelwa kabusha akumele kususelwe kwimemori uqobo kepha mhlawumbe kungakufanele ukuyihlanganisa nomsebenzi futhi kuhloswe ngayo imisebenzi yokuphatha.
UPitteri, M., Dapor, C., Pisani, AI, Castellaro, M., DeLuca, J., Chiaravalloti, N.,… noCalabrese, M. (2019). Ukusebenza okuphethe kuthinta inqubo yokufunda ngomlomo ezigulini eziningi ze-sclerosis: Imiphumela yokuziphatha nokuzicabangela. Ijenali ye-Neuropsychology.
ukusilela kwengqondo ku-sclerosis eminingi, ukuqonda okusilelayo ukuqina kwesifo sokuqina kwesifo emzimbeni, inkumbulo ye-sclerosis eminingi, multiple sclerosis, i-sclerosis eminingi nemisebenzi ephezulu
I-Multiple sclerosis: ubudlelwano phakathi kwemisebenzi yesikhundla kanye nenkumbulo yesikhathi eside yomlomo2019-12-282020-02-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2019/12/memoria-e-funzioni-esecutive.png200px200px
Ngabe izinga lemfundo linomthelela ezingeni lezemfundo?Imibhalo, izindatshana, ubuhlakani, i-Neuropsychology
Amakhono wezibalo ezinganeni zasenkulisa: ukubaluleka kokwazi ukubona izindlela ezijwayelekileImibhalo, Imibhalo, i-DSA, i-DSA, i-Neuropsychology